China HFD kwụ Froth mgbapụta (Repalce AHF) emepụta na suppliers | damei kingmech mgbapụta
Ike: 0-3151m3 / h
Materail: CR27, Cr28, CD4MCu, ihe mkpuchi roba
HFD Slurry mgbapụta bụ kwụ-arọ abrasive ọrụ froth slurry mgbapụta. ya na ngwa pumping slurry na obstinate froth. nke a pụrụ iche imewe-inducer agụba impeller dozie nsogbu a mfe.
Were obere nnukwu, arụmọrụ dị elu.
Onye na - eme ka mmiri na - ebu ibu na nnukwu ntinye, uru a na nnukwu ihe siri ike na - abịa Enwere ọdịiche dị n'etiti ịmịpụta ụfụfụ na ihe eji eme ihe. HFD slurry pump of high arụmọrụ to pump high viscosity slurry.
Nsogbu nke ijikwa ụfụ n'ụfọdụ usoro mmekọrịta pụrụ ịbụ ihe na-akụda mmụọ. Oge iwe ga - eme ka ikuku gbapụta mgbapụta. The froth inducer agụba impeller edozi nsogbu a. Ihe ga-esi na ya pụta bụ obere ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ, obere nhọrọ mgbapụta, na arụmọrụ dị elu
Ihe ọzọ bara uru nke ihe a na-eme ka mmiri na-arụ ọrụ na nnukwu ntinye bụ na ọ na-ewelite oke ịta ahụhụ nke mgbapụta nwere ike ijikwa. Dị ka nsogbu bụ isi nke ijikwa froth bụ nke yiri nke ijikwa slurries viscous, na-enweta slurry n'ime mgbapụta ka o wee nwee ike ịmịnye ya, mgbapụta a egosila na ọ bụ onye na-eme ihe ngosi dị ukwuu na slurries mgbasa ozi viscous slurries. Tụkwasị na nke a, a na-ekpochapụ nsogbu ndị na-asọpụta na-asọpụta na-ejikarị atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka mmiri na-asọba na slurries viscous. Na ntọhapụ nke mineral site na ore, ọ na-esekarị site n'iji ndị ọrụ flotation siri ike. Ọfụma na-ebu ọla kọpa, molybdenum ma ọ bụ ọdụ ọdụ ka eweghachite ma mezie ya ọzọ. A siri ike egosipụta egosipụta mbibi na ọkọlọtọ slurry nfuli mgbe na-eme nhọrọ nke gabigara ókè nnukwu na adighi ike nfuli. Igwe ọkụ Froth bụ nha dị obere ma rụọ ọrụ nke ọma. Onye na-ebugharị ihe na nnukwu ụzọ dị ukwuu na-emesi obi ike ma ọ bụ viscous slurries na-abanye na impeller na-enye ohere ka mgbapụta ahụ buga ya na ebe ọzọ. dị mfe ojiji.
A mụrụ nke froth mgbapụta dozie nsogbu abụọ na Ngwuputa: froth, elu viscosity liquids.
Nke a mgbapụta nwere ike ọtụtụ-eji na ọla kọpa na Ngwuputa, alumina Ngwuputa, ore.
Nke gara aga: HADPP Nrụgide oru abrasive slurry mgbapụta Na Series (Repalce AHPP)
Osote: HSD Nrụgide oru Slurry Ọrụ mgbapụta (Repalce XU)
SXD Centrifugal mgbapụta
VFD Vetikal Froth mgbapụta (Repalce AF)
WAD na-adịghị ike abrasive ọrụ slurry mgbapụta (Repalce L / M)
API610 BB1 (SHD / DSH) mgbapụta
SSD Submersible mgbapụta